Sida looga Bilaabo RESP-kayga Dhinaca SmartSAVER.org Su’aalo Sida loo Helo Lambarka Caymiska Bulshada
Maxaan u isticmaalayaa dalabka onlaynka ah ee SmartSAVER-ka Start My RESP halkii aan toos u aadi lahaa bangigayga?
Waa inaad u isticmaasho RESP sida aad dareento inay kuugu fiican tahay. Start My RESP waxay bixisaa galaangal u yeelasho onlayn ah oo habboon, hab qofka isticmaalaya u sahlan iyo xidhiidh toos ah ee bixiyayaasha RESP kuwaasi oo bixiya RESP-yo bilaa lacag ah oo aanay jirin gacan-gaysad ugu yar. Sidoo kale waxaad waydiisan kartaa RESP-yo la mid ah adiga oo soo booqanaya bangiyada aanu wada shaqayno.
Ka waran haddii bangigaygu aanu ahayn ikhtiyaar Start My RESP?
Ma aha khasab inaad tahay macmiil jira bangiyada aanu wada shaqayno si aad u buuxiso dalabka Start My RESP. Waxaad ka furan kartaa xisaab bixiyaha RESP si aad u hesho Canada Learning Bond (Bondka Waxbarashada Canada).
Taas beddelkeeda, waxaad la xidhiidhi kartaa bangigaaga hadda si aad u waydiisato inay kaa caawiyaan bilaabista RESP si aad u esho Canada Learning Bond (Bondka Waxbarashada Canada).
Goorma ayuu bangigu isoo wacayaa?
Dalabkaaga waxa toos loogu gudbinayaa bangiga aad dooratay. Marka aad gudbiso dalabkaaga waxaad filan kartaa bangigu inuu kugula soo xidhiidho 2—3 maalin shaqeed. Haddii aad gudbisay dalab oo aad ka cabanayso inaan war lagugu soo celin, fadlan la xidhiidh SmartSAVER adiga iimaylka info@smartsaver.org ama adiga oo wacaya 1-855-RESP-CLB (737-7252)
Hore ayaan u lahaa RESP. Ma heli karaa Canada Learning Bond (Bondka Waxbarashada Canada)?
Haddii aad hore u lahayd RESP, waxa dhici karta inaad hore u lahayd Canada Learning Bond (Bondka Waxbarashada Canada). La xidhiidh bixiyahaaga RESP si aad u ogaato.
Ayaa isticmaali kara Start My RESP?
Start My RESP waxa loo abuuray buuxinta baahiyaha qoysaska mutaystay Canada Learning Bond (Bondka Waxbarashada Canada). Si aad wax dheeraad ah uga ogaato mutaysiga Canada Learning Bond (Bondka Waxbarashada Canada), dhagsii halkan.
Ayaan kala hadli karaa dalabka Start My RESP ee SmartSAVER.org?
Fadlan nagula soo xidhiidh iimaylka info@smartsaver.org ama naga soo wac 1-855-RESP-CLB (737-7252). Taageero toos ah oo leh adeegyo tarjumaad ayaa la heli karaa Isniinta ilaa Jimcaha inta u dhaxaysa 9 gh – 5 gd.
Maxaad ku samaysaa macluumaadkayga qof ahaaneed sidee ayaana loo kaydiyaa?
Macluumaadkaaga gaarka ah waxa si ammaan ah loogu wareejiyaa kaliya baniga aad dooratay inaad ka furato RESP-gaaga. SmartSAVER ma kaydiyo macluumaad qof ahaaneed oo xasaasiya sida Lambarrada Caymiska Bulshada. Macluumaad dheeraad ah oo kusaabsan sida aan u maamulno macluumaadkaaga qof ahaaneed, fadlan fiiri Siyaasadayada Kali Ahaanshaha.
Imisa ayey ku kacaysaa in la furto RESP iyada oo la isticmaalayo Start My RESP?
Ma aha lacag furashada RESP iyada oo la isticmaalayo dalabka onlaynka ah ee SmartSAVER-ka Start My RESP. saaxiibada SmartSAVER khaas ahaan bixiyayaasha RESP kuwaasi oo ku bixiya RESP-yada iyada oon xisaab la samaysan, ayna jirin kharash isqoris ama sannadle ah ama shuruudaha gacan-gaysadka ugu yar. Lagaagama baahna inaad ku bixiso wax lacag ah RESP-ga ilmahaaga si aad u hesho Canada Learning Bond (Bondka Waxbarashada Canada).
Waa maxay qabasho?
Canada Learning Bond (Bondka Waxbarashada Canada) waxa kaliya lagu isticmaali karaa waxbarashada dugsiga sare ka dambaysa waana in lagu isticmaalo 36 sano gudahood. Haddii ilmuhu aanu xaadirin waxbarashada dugsiga ka dambaysa, Canada Learning Bond (Bondka Waxbarashada Canada) iyo wixii deeqo u dhigma waxa khasab ah in lagu celiyo Dawladda. Wixii gacan-gaysadyo aad ku samaysay RESP-ga ilmahaaga had iyo waxay sii ahaanayaan hantidaada waana lagu soo celinayaa.